Qorshihii ciidanka dawladu kula wareegi lahayd amniga dalka oo wadano ka xanaaqeen - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Qorshihii ciidanka dawladu kula wareegi lahayd amniga dalka oo wadano ka xanaaqeen
Qorshihii ciidanka dawladu kula wareegi lahayd amniga dalka ayaa wadano ka xanaaqeen. Wadamadan oo ciidano sharci ah iyo kuwo aan sharci ahaynba ay ka joogaan Koofurta dalka ayaa diidan inay baxaan.
Kiiniya ayaa walaac ka muujisay qorshaha dawladu ay maanta hordhigtey kooxda beesha caalamka la baxdey. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dawladiisu hanan karto amniga dalka muddo laba sano ah.
Tani ayaa ka cadhaysiisay Yugandha iyo Kiiniya oo ku qaata kumanaan doolar, ciidaknooduna ka helo nafaqo ayna waligood heleen.